TACSI GEERIDA MARXUUM MAXAMED XASAN YAASIIN | Araweelo News Network (Archive) -
TACSI GEERIDA MARXUUM MAXAMED XASAN YAASIIN
Anigoo ku hadlaaya magaca reer Cabdi Carwo iyo kan xaaskayga Amaal Cumar Carte waxaan
tacsi u dirayaa ehelka, ubadka, tafiirta kale, gacalka, qaraabada, xigaalka, xito iyo asxaabta uu MARXUUM MAXAMED XASAN YAASIIN ka tegay meel kasta oo ay joogaanba . Si gaar ah waxaan u tacsiyadeynayaa reer Xasan Yaasiin iyo tafiirtooda, iyo dhammaan reer Yaasiin Dheere.
Marxuum Maxamed oo xajka ka soo laabtay ayaa gaadhi kula qalibmay dariiiqa Berbera isagoo Hargeysa ku soo socday. Iyadoon geerida la baajinayn, ayey kala haboontay xiliga la dhintaa. Tanina waxay ka mid tahay kuwa ugu fiican, ee adduunka Alle jecel yahay ku geeriyoodo.